Iyo Linux Foundation neMicrosoft Inoshanda kuDecarbonize Yemagetsi Grid | Kubva kuLinux
Iyo Linux Foundation neMicrosoft vanoshanda pamwe kugadzirisa dhizaini yemagetsi
Sechikamu chekudyidzana pakati peLF Energy neMicrosoft kugadzirisa giridhi yemagetsila Dr. Audrey Lee, Mukuru Director weSimba Strategy paMicrosoft, akasarudzwa kumiririra nhengo dzese dzeBhodi revatungamiriri veLF Energy Foundation.
Muhurukuro naSwapnil Bhartiya weTFiR, Audrey Lee akataura nezve izvo zvibodzwa decarbonization yemagetsi kubva kuMicrosoft uye mukana wekubatana nenhengo dzeLF Energy.
Audrey lee akatungamira kubatanidzwa paMicrosoft, uyo achangobatana neLF Energy Foundation, uye Mai Lee vakacherekedza kuti hapana chinzvimbo, kunyangwe simba rakafanana neMicrosoft, kana vatengi kana zvinoshandiswa, zvinogona kugadzirisa matambudziko ari pamberi payo ega.
Kuti uite chikamu chako, Microsoft yakazvipira kuti ne2030, 100% yemagetsi ekushandisa, 100% yenguva, ichave inogadziriswa nekutenga isina-kabhoni simba.
Audrey akacherekedza, uye tinobvumirana, kuti hapana chinhu chimwe chete, kunyangwe simba rakafanana neMicrosoft, kana vatengi kana zvinoshandiswa.
Kuti iite chikamu chayo, Microsoft yakazvipira kuti panosvika 2030, 100% yemagetsi ayo, 100% yenguva, inoenderana nekutenga zero-kabhoni simba.
Uku ndiko kuedza kunofanira kuitwa nemakambani ese kushandura hupfumi hwedu uye kuchengetedza nyika. Kutsiva mainjini, kusanganisira zvisaririra, simba iro hupfumi hwedu hwepasi rose hausi mukana wepamberi pekukwikwidza, asi kufora kwekushandira pamwe kumisa shanduko yemamiriro ekunze uye kutyisidzira kwakakomba kwenzanga nehupfumi kwainovimbisa.
Izvo zvinotaurwa kuti nhengo dzeLF Energy dzinogutsikana kuti kune goridhe kumagumo kweiyi muraraungu uko hunyanzvi husingaparadze capital, asi huchibvumira zvakawanda kuti zviitwe nepashoma. Sekureva kwaLee, Microsoft "haigone kudzora zvawanikwa panzvimbo yedu " uye haigone kudzora kuti magetsi anogadzirwa sei. Nekudaro, Microsoft inogona kushanda nevamwe kukurudzira nzira yaunotenga nayo magetsi uye kuenda kune decarbonizing iyo yakazara gridhi remagetsi.
Uku kubatanidza kwekubatana kwehunyanzvi, simba nemafungiro ndicho chikonzero nei LF Energy iripo. La decarbonisation haichisiri yemhando yepamusoro, kunyangwe kana sarudzo, uye haifanirwe kuonekwa semakwikwi emakwikwi akachengeterwa vashoma. Icho chinhu chakakosha mukugadzira ramangwana rakasimba kune vese.
Uye makambani ese, masangano ese, ese zvikamu zvehupfumi anofanira kuenda. Mabhiriyoni emadhora achashandiswa kushandura hupfumi, uye maindasitiri titans anofanirwa kutungamira nzira.
LF Energy inotyaira ekucheka-kumucheto yakavhurika sosi mapurojekiti kugonesa ichi chinangwa. Nekubatana nevamwe, kusanganisira Microsoft, hunyanzvi uhu hunogona kubuda nekukurumidza uyezve hwobva hwapararira muindasitiri yesimba.
Sekutaura kunoita Dr. Lee mubvunzurudzo yake, LF Energy iriwo foramu yekubatsira kusimudzira shanduko munzvimbo dzekutonga. kuitira kuti ivowo vagamuchire kudyara uye shanduko yesainzi.
Makambani anhasi emagetsi anoshanda akafanana neakazvimiririra ekutaurirana emakumi mashoma apfuura, sezvo kutaurirana kwakabata mikana yeInternet uye kwashandurwa.
Energy services makambani nhasi ari padombo rakafanana, nekuti sevatariri vanovatarisa, ivo vari kudawo shanduko yekutonga, kuitira kuti marongero akurudzire, uye pamusoro pezvose zvisatadzise, ​​kudyara muhunyanzvi.
Zvakakosha kuti mabhizinesi, masangano nevakuru vehurumende - ndokuti, tese - chikamu chekuedza uku kuitira kuti ikwanise kufambira mberi nekukasira kwakakosha kusangana nedambudziko.
Kunyangwe mhinduro dzingawanikwe mumatekinoroji matsva, mafungiro matsva, mirau mitsva, kana zvingangoita zvese zviri zvitatu uye nezvimwe zvinhu zvakawanda, LF Energy ichave iriko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Iyo Linux Foundation neMicrosoft vanoshanda pamwe kugadzirisa dhizaini yemagetsi
Kali Linux 2021.3 inosvika nematurusi matsva uye vhezheni yeNetHunter yeTicWatch Pro